Warar hordhac ah oo laga helaayo weerarkii maqaayadda Banaadir Beach ee xeebta Liido iyo rasaas weli dhaceeysa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Warar hordhac ah oo laga helaayo weerarkii maqaayadda Banaadir Beach ee xeebta Liido iyo rasaas weli dhaceeysa
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa weerarka gelinka dambe maanta lagu qaaday maqaayadda Banaadir Beach oo ku taala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Koox hubeysan oo tiro ahaan la sheegay inay yihiin ilaa seddax nin ayaa ilaa haatan ku dhex jirta dhismaha maqaayadda Banaadir Beach, waxaana jiro qasaare badan oo ka dhashay weerarkaas.
Inkastoo aan la xaqiijin karin qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay ayaa warar hordhac ah waxay sheegayaan in dhowr qof oo shacab ah uu waxyeelo kasoo gaaray, inkastoo dadkii ku sugnaa gudaha maqaayadda ay intooda badan ka carareen.
Wariyaasha warbaahinta Bulshoweyn ee ku sugan agagaarka goobta uu weerarka ka dhacay ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka iyo kuwa Kumaandooska ee loo yaqaano DANAB ay goobta gaareen, iyagoona kadib xiray dhamaan wadooyinka soo gala goobta ay rasaastu ka soconayso ee Banaadir Beach Restaurant.
Ilaa iyo haatan lama sheegi karo qasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxa ka dhacay afaafka hore ee maqaayadda Banaadir Beach iyo sidoo kale rasaasta oo weli ka dhex dhaceeysa gudaha maqaayadda, waxaana sida la sheegay rasaastaasi is-dhaafsanaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kooxihii weerarka soo qaaday oo tiro ahaan lagu sheegay inay yihiin ilaa seddax nin.
Wixii soo kordha dib kala soco wararkeena dambe Insha Allaah.